» ‘संविधानमाथि केपी ओली, कानून,माथि दुर्गा प्रसाई’ भन्दै डा. केसीका, समर्थकहरुको प्रदर्शन (फोटोफिचर)” ‘संविधानमाथि केपी ओली, कानून,माथि दुर्गा प्रसाई’ भन्दै डा. केसीका, समर्थकहरुको प्रदर्शन (फोटोफिचर)” – हाम्रो खबर
‘संविधानमाथि केपी ओली, कानून,माथि दुर्गा प्रसाई’ भन्दै डा. केसीका, समर्थकहरुको प्रदर्शन (फोटोफिचर)”
“काठमाडौं, २७ जेठ । ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी’ ले आज सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौंमा आज उनीहरुले विभिन्न प्लेकार्डसहित सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरुले बोकेको प्लेकार्डमा ‘संविधानमाथि केपी ओली, कानूनमाथि दुर्गा प्रसाई’, ‘ओलीको मिसन, सिटामोलमा कमिसन’ नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । प्रदर्शनमा उत्रिएका केहीलाई भने प्रहरीले प,क्राउ गरेको छ ।”
वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको अडान विपरीत सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइए सत्याग्रह गर्ने ?चे,तावनी दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया विचाराधीन छ।
केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएकै बेला उनका समर्थहरुले आज सरकारको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम